Fikarohana momba ny firaisana Raharaha fanavaozana indray ao amin'ny La Duchesse De Bourgogne | Angelina Jolie sy Past Lives of Billy Bob Thornton & Brad Pitt - Fikarohana Reincarnation
Rehefa nangataka andro naharitra ho an'i Angelina Jolie aho dia nilaza tamiko i Ahtun Re fa mpikambana ao amin'ny Fitsarana frantsay Louis XIV izy. Nahazo boky mifandraika amin'ity vanim-potoana ity aho ary namaky momba ny vehivavy iray izay toa mety ho lalao mety ho an'i Angelina.
Fitondran-tena lasa teo aloha: Mikarakara ireo mahantra
Ny nahasarika ny saiko dia ity mpikambana aristokrasia ity, La Duchesse De Bourgogne, nanana fo fatratra ho an'ireo sahirana, izay nasehony tamin'ny nandraisany fianakaviana mahantra 40 teo ambanin'ny elany. Izany dia mifanaraka amin'ny fahalianan'i Ramatoa Jolie amin'ny raharaha ara-tsosialy. Tamin'ny fivoriana iray nifanaovana tamin'i Kevin Ryerson dia nanamafy i Ahtun Re fa i Angelina Jolie dia La Duchesse De Bourgogne tamin'ny lasa nofo lasa.
Fifandraisan'ny fiainana taloha: Brad Pitt sy Billy Bob Thornton
Ny fotoam-pialana taloha ho an'i Brad Pitt dia fantatra ihany koa tamin'izany vanim-potoana izany. Izy dia teny frantsay iray lietnà miaramila izay nanana feon-dàlana tamin'ny Duchesse. Mampalahelo fa tsy mbola afaka namantatra io olona io teo amin'ny tantaran'ny frantsay aho.
Ny Duchesse kosa dia nanambady mpikambana aristokrasia iray hafa, Duc de Bourgogne, izay tamin'ny vanim-potoana ankehitriny dia tonga nofo vaovao indray ho vadin'i Angelina, Billy Bob Thornton.
Fitoviana ara-batana amin'ny fotoana iray amin'ny hafa: Misy fitoviana eo amin'i Angelina Jolie sy La Duchesse De Bourgogne, na dia tsy noheverina ho tsara tarehy tahaka an'i Angelina aza ny Duchesse, toy ny tamin'ity androm-piainana taloha ity dia nify niondrika izy ary mandeha miaraka am-pitaka, satria fohy kokoa ny tongotra iray. Ny fitoviana ihany koa dia voamarika eo anelanelan'i Duc de Bourgogne sy Billy Bob Thornton.
Fanovana ny fiarahamonina Nasionaly sy ny fiarahamonina Ethique hatramin'ny Fahaiza-miaina Fahatongavana ho an'ny hafa: Angelina Jolie, Brad Pitt ary Billy Bob Thornton dia frantsay tao anatin'ireo fahatongavana ho filoham-pirenena ireo sy ny Amerikana tamin'ny vanim-potoana ankehitriny.
Fanavaozana ny fifandraisana amin'ny alalan'ny fanambadiana: Ireo olona telo niaina tamin'ny vanim-potoana Lous XIV dia niara-nihaona tamin'ny Hollywood ankehitriny.